आज साउन १५ गते शुक्रबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल - kageshworikhabar.com
आज साउन १५ गते शुक्रबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
आज मिति वि. सं. २०७८ साल श्रावण १५ गते। शुक्रबार। तपाईंको आजको राशिफल
कम समयमा धरै धन प्राप्त गर्ने लोभमा फस्न सकिन्छ। सचेत रहनु होला । मानसिक रूपमा तपाईंको एकाग्रता कम हुनेछ। स्वास्थ्यको बिशेष ध्यान दिनु होला । पैसाको लेन-देनमा सजग रहनु होला । चोट पटक तथा भयको सम्भावना रहेको छ । परिवारमा शुख शान्ति छाउने छ ।
घर तथा सन्तानबाट शुभ समाचार मिल्नेछ । पुराना मित्र भेट हुनाले मन आनन्दित हुनेछ । नयाँ मित्र बन्ने योग छ । व्यवसायमा अधिक लाभ हुनेछ । मध्यान्न पछि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । लेन-देनमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । धार्मिक कार्यमा धन खर्च हुनसक्छ ।
दिन लाभदायक हुनेछ । व्यवसायमा उच्च अधिकारीको कृपा दृस्टीले प्रगति हुनेछ । व्यापार व्यवसाय बढ्ने छ । डुबेको लगानी उठ्ने छ । बाबुको तर्फबाट लाभ हुनेछ । मित्र लाभ हुनेछ । सामाजिक कार्यमा सहभागी भइने छ ।
आफूभन्दा ठुलासँगको संवादमा सचेत रहनु होला । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । व्यापारमा बाधा आउन सक्छ । तर मध्यान्न पछि व्यवसायमा समय अनकुल हुनेछ । तपाईंको कार्यबाट उच्चअधिकारी प्रशन्न हुनेछन् । आर्थिक दृस्टीले लाभ हुनेछ।
रिस र बोलीमा संयमता राख्नुहोला । स्वास्थ्यको ध्यान दिनु होला । सरकार विरोधी काममा सहभागी नहुनु होला । मानसिक चिन्ता बढ्ने छ । परिवारमा कलह बढ्न सक्छ । लामो यात्राको योग बनेको छ ।
बिहानको समयमा साथी भाइसँग घुमफिरमा समय बित्नेछ । सहकर्मी संगको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । मध्यान्न पछि स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। स्वास्थ्यको लागि धन खर्च हुनसक्छ । आकस्मिक धन लाभ हुनाले मानसिक चिन्ता कम हुनेछ ।
आज हरेक कार्यमा आत्मबल बढ्नाले गरेका काम सफल हुनेछ । परिवारमा शुख शान्ति छाउने छ । मन प्रशन्न हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ ।मध्यान्न पछी मनोरंजनमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ अनभव हुनेछ।
मानसिक रुपमा भाबुक्ता बढ्ने छ । मानसिक तनाव बढ्ने छ । पढाईमा सफलता प्राप्त हुनेछ । कल्पना शक्ति बढ्नाले साहित्य लेखनमा मन जानेछ । परिवारमा शान्तिको वातावरण बन्नेछ । व्यवसायमा लाभ हुनेछ । सहकर्मीको सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
परिवारमा विवाद हुन् सक्छ बोलीमा बिषेस ध्यान दिनुहोला । आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। धन र प्रतिष्ठामा आच आउन सक्छ । मध्यान्न पछि स्वभावमा भावुकता आउने छ । सिर्जनात्मक शक्तिमा सकारात्मक वृद्धि हुनेछ । बिद्यार्थीको लागि समय अलकुल रहेको छ ।
कुनै पनि निर्णय लिंदा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । साथी भाइसँग भेट हुनेछ । छोटो यात्रा हुनेछ । मध्यान्न पछी प्रतिकूल घटनाहरूले तपाईंको दिमागलाई अस्वस्थ बनाउँदछ। शारीरिक रुपमा स्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ । अचल सम्पत्ति कागजात गर्दा सावधान हुनुहोस्। आमाको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता हुनेछ।
क्रोध र बोलीमा बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ । खान पानामा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने रहेको छ । नकारात्मक भावनाको वृद्धि हुनसक्छ । रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक क्षेत्रमा सम्मान बढ्ने छ । आकस्मिक धन लाभ हुनसक्छ ।
दिन शुभ रहेको छ । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ । नयाँ कार्यको आरम्भको लागि शुभ समय रहेको छ । धार्मिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ । रमाइलो यात्रा हुनेछ । मध्यान्न पछि कसैसंग विवादमा फस्न सकिन्छ सचेत रहनु होला । धन लेन-देन गर्दा सावधानी अपनाउनु होला ।
Previous articleविश्वका १३२ देशमा फैलियो कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरियन्ट : डब्लुएचओ
Next articleआज साउन १५ अर्थात खीर खाने दिन, यस्ताे छ साउनमा खीर खानुकाे महत्व !